Ireo 5 tsara indrindra mpanova litera tsara tarehy | Famoronana an-tserasera
Lola curiel | | loharanom-baovao, Inspiration, dia midika hoe
Raha tianao ho manaitra sy mamorona kokoa ny lahatsoratrao amin'ny tambajotra sosialy, dia tsara ny mankany amin'ireo mpanova taratasy mahita endritsoratra milay ary izany, tsy isalasalana, dia hampiavaka anao amin'ny ambiny. Amin'ity lahatsoratra ity dia nangoninay ireo 5 niova fo tsara indrindra tamin'ny taratasy tsara tarehy noho izany ahazoanao miditra amina endrits tsy mampino. Atsaharo ny fampiasana ireo litera default ary ataovy taratry ny fombanao ny lahatsoratrao!
Source Is a mpanova izay manome fidirana amin'ny karazana litera tsy mampino sy manaitra tokoa. Tena mora ampiasaina, eo an-tampon'ny tranonkala dia hahita boaty iray ahafahanao mampiditra ny lahatsoratrao. Rehefa manao izany ianao dia ho adika ho azy ao amin'ireo endrika samihafa misy. Raha mikorisa ambany ianao dia hahita bokotra iray handefasana endrits maro kokoa Manana abidy enimpolo mihoatra ny misy ianao! Rehefa mahita ny endri-tsoratra tonga lafatra ho anao ianao, mila maka tahaka sy mametaka fotsiny ianao.
Saika ny loharano rehetra dia cMifanaraka amin'ireo tamba-jotra toa ny Twitter, Instagram, Facebook na WhatsApp. Na izany aza, misy fetra vitsivitsy:
Ilay mpanova tsy manohana taratasy misy accents na ilay litera "ñ"
Tsy ampirisihina hampiasa lahatsoratra lava loatra, toy ny tsipika 2 ambony indrindra
ny sasany endri-tsoratra tsy tohanana amin'ny alàlan'ny lampihazo Andramo alohan'ny hamoahana!
lyricsyfonts.com te mamela anao hiteraka lahatsoratra manintona haingana sy mora. Amin'ny alàlan'ny fandikana sy ny fametahana azy ihany no ahafahanao manolo ny endrika tsy misy mankaleo amin'ny endriny mamorona bebe kokoa.
Ny mpanova dia manome endritsoratra tsy manam-petra amin'ny fomba samihafa, mampiasa endri-tsoratra kaody tokana na Unicode. Noho izany dia matetika tsy manome olana maro izy ireo rehefa mampihatra izany amin'ny tambajotra sosialy, nanomboka aryNy programa dia tsy mamorona marika vaovao, fa manambatra marika efa misy hamoronana endrika tsy manam-paharoa.
Na izany aza tsy mandeha foana io. Amin'ny tranga sasany, sehatra toy ny Instagram, Facebook na Twitter no manivana ireto litera ireto mba tsy hanararaotan'ireo mpampiasa ny marika Unicode, ka manakana ny sasany izy ireo, noho izany zava-dehibe ny hijerenao alohan'ny hampiasana azy ireo!
letterconverters.com Is a mpamorona endrika typografika vaovao sy mamorona feno tanteraka, amin'ny totaliny dia manolotra Abidia 73 namboarina tsy mitovy. Ny zavatra tsara indrindra momba ity programa ity dia, rehefa mitady ny endri-tsoratra tonga lafatra ho anao, azonao atao ny manivana araka ny fomba. Manana sokajy isan-karazany misy ianao: manafintohina, an-tanana, kanto, tsy fahita, antitra ...
Para alaivo ny lahatsoranao dia mila miditra fotsiny izay tianao holazaina ianao ao anaty boaty eo an-tampon'ny efijery ary kitiho ny fidirana amin'ny kitendry solosainao. Etsy ambany dia hiseho ho voaova ho azy izy io amin'ireo endrika samihafa noforonin'ity mpanova litera tsara tarehy ity.
convertletters.com Is a karazana generator izay mamokatra marika unicode, natao manokana ho anao handika ny lahatsoratrao ary hametaka azy ireo ao amin'ny tantaram-piainanao, amin'ny hafatrao na amin'ny hevitrao. Tsotra be ny fampiasana azy, soraty fotsiny ny lahatsoratrao toy ny fanaonao ao anaty boaty fotsy miseho eo an-tampon'ny tranonkala, eto ambany no ahitanao an'io lahatsoratra io ihany nosoratana tamin'ny fomba hafa. Safidio ilay tianao indrindra ary tsindrio ny bokotra mena manao hoe "kopia" Ho vonona hizara izany amin'ny tambajotran-tserasera ianao!
El Piliapp converter Somary tsotra kokoa noho ireo hitantsika teo aloha izy io ary na dia tsy dia be loatra aza ny fomba fanolorana azy dia tena ilaina tokoa, satria mamela anao hanova haingana ny endrik'ireo lahatsoratrao, hanome anao safidy eo amin'ireo endritsoratra azo vakina sy tsara tarehy. Mora ny fampiasana azy, mila manoratra fotsiny ny lahatsoratra tianao hovaina amin'ny kianja fotsy ianao, etsy ambany no manome anao safidy eo amin'ny fomba maro. Rehefa tsindrio ny iray amin'izy ireo, ho hitanao fa ny sasany amin'izy ireo dia manana fahasamihafana samihafa. Afaka misafidy ianao:
Lahatsoratra bubble, afaka misafidy amin'ny bolongana mainty sy fotsy.
Negrita, misy amin'ny endriny isan-karazany: italic, serif, ary sans serif.
Taratasy mivaingana, azonao atao ny manome azy ireo sahy raha tianao.
Satroka kely, ho an'ny lohateny lehibe.
Lahatsoratra efajoro, afaka misafidy eo amin'ny kianja mainty sy fotsy.
Typografika taloha, azo alaina amin'ny bold.
Mihemotra lahatsoratra, azonao atao ny manova ny fahatsapana ny fanoratana.
Ankoatra izany, ao anatin'ny tranonkala dia hahita mpanova isan-karazany ianao ho an'ny fomba manokana. Manana ny mpanova lahatsoratra niampita ahafahanao miampita ny lahatsoratranao na manoratsoratra azy amin'ny fomba samihafa. Eo an-tampon'ny efijery dia ho hitanao ihany koa ny mpanova ink tsy hita maso, ho anao hamoronana lahatsoratra sarotra vakina, mitovy amin'ny ranomainty tsy hita maso amin'ny iPhone. Farany, manolotra a «Zalgo» mpanova lahatsoratra izay manampy marika sy tarehintsoratra etsy ambony sy ambanin'ny lahatsoratra tany am-boalohany.
Toy ny amin'ireo mpanova taratasy mahafatifaty, amin'ity tsy maintsy manoratra ny lahatsoratrao ianao, misafidy fomba iray ary mandika ilay andianteny novaina hampiharana azy amin'ny tambajotran-tseraseranao Jereo raha manohana ny endri-tsoratra rehetra ny sehatra!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » Top 5 mpanova litera mahafatifaty